Caruurta Cayilan Jimicsigu Faaido Miyuu U Leehahay Mise? (DARAASAD) - Daryeel Magazine
Caruurta Cayilan Jimicsigu Faaido Miyuu U Leehahay Mise? (DARAASAD)
Haddii uu wiilkaadu cayilanyahay isla markaane uu diido aalamiintada ama cayaarta inuu la qaato asaagiisa, isaga oo ka cabanaya xanuun haku qasbin, waayoo cilmi-baaris kasoo baxday dalka Austaralia ayaa lagu sheegayaa in jimicsigu ala aalamiintadu dhib u keenayso lugaha cunugga cayilan, maadaama uu culayskiisu ka tan badanyahay lugahiisa.
Carruurta ladan (Cayilan) ee joogteeya aalamiintada ama jimicsiga waxay ka cawdaan xanuunno joogto ah, iyo inay mar kasta ka sheegtaan lugaha.
In kasta oo daraasadaan lagu sheegay inay muhiim u tahay guud ahaan jirka, haddana waxay dadka aadka u cayilan kula talinaysaa siyaabo ama qaabab kale oo ay ku dhimi karaan miisaankooda, sida: Dabaasha, wadidda baaskiillada. Arrintaan ayaa muhiim u ah dhimista jirka carruurta cayilan iyada oo laga ilaalinayo xanuunno kale.
Dhanka kale haddii aan is waydiinno tira ahaan intee ayay la egyihiin carruurta cayilan guud ahaan dunida?
Jawaabta waxaa ugu dhaw war bixinta ay soo sartay hay’aad caafimaadka adduunka ee WHO, iyadoo ku sheegta tirada carruurta cayilan inay gaarayaan 40 milyan oo cunug, ku darso oo waa kuwa aan 5 sano gaarin. Intaa kaliya ma ahane waliba waxay kasii digaysaa kororka ku imaan doona carruurta cayilan iyadoo sheegtay in sanadda 2025 ay carruurta cayilan ee dunida ku nool ay gaari doonaan 75 milyan oo cunug.
Gaba gabadii waxaa muhiim ah in waalidku ku baraarugsanaadaa halista arrintaan isla markaane uu ka fakaro caafimaadka, iyo hab noolaanshaha cunigiisaba.
Muhiimada Lowsku U Leeyahay Caafimaadka Lafaha Caruurta Faaidada Kalluunku U Leeyahay Caruurta Yaryar Sidee Caruurta Loogu Barbaarin karaa Akhriska?